ChiGERMANY UNIQUE ARTICLES, CHINOKOSHA CHIRIKELEL | Kudzidza ChiGerman, Kudzidza ChiGerman
musha » Top German Courses » ChiGermany Chisingazivikanwi Articels (Unbestimmte Artikel)
Muchidzidzo chino Indefinite nyaya muGermany Takapa tsanangudzo yakajeka pamusoro pezvinyorwa zveGermany mune zvidzidzo zvedu zvekare. German articles Iwe unogona kuwana zvese zvidzidzo pamusoro pezvinyorwa zveGermany kuburikidza nehurukuro.
Takatotsanangura zvakadzama zvimwe zvikamu zvemuGermany.Zvino ngationei zvinyorwa zvisinganzwisisiki muchiGermany uye tsanangura kusiyana pakati pezvimwe zvezvinhu uye zvimwe zvinhu.
1 GERMANY UNIQUE ARTICLES (UNBESTIMMTE ARTIKEL)
2 NON-POSITIVE NYAYA DZICHITIKA MUGERMAN
3 NON-NEGATIVE NYAYA DZICHITIKA MUGERMAN
Mienzaniso ye4 GERMAN NYAYA DZOKUDZIDZA
MAGERMAN UNIQUE ARTICLES (UNBESTIMMTE ARTIKEL)
Muchikamu chakapfuura, takatarisa pane zvimwe zvigadzirwa.
MuchiGermany, zvinhu zvisingazivikanwi zvakagadzirwa zvikamu zviviri: zvakanaka zvisingaverengeti zvinyorwa uye zvisina kunaka zvinyorwa. Indefinite artifacts hazvizivikanwe, inogadziriswa, inoshandiswa kureva chero chimwe chinhu.
Tichakupai muenzaniso mitsara kuitira kunzwisisa kwakanakisisa nyaya yacho. Tinovimba kuti muchanzwisisa musiyano pakati pezvimwe zvinhu uye zvinhu zvisingazivikanwi.
Nechinangwa chayo, inozivikanwa kana yakambotaurwa, yakamboonekwa, ukuru, upamhi, ruvara nezvimwe. anozivikanwa zvinhu izvo zvinhu zvinozivikanwa.
Izwi rinoreva zvisiri izvo rinoreva chero sangano risina nguva.
Tichaita kuti tsananguro idzi dzive pachena nemuenzaniso uri pasi apa.Ipapo kana ukaongorora muenzaniso wezvirevo zvinopiwa pasi apa, unogona kunzwisisa zviri nyore kusiyana kwemashoko maviri.
1- Baba vakabvunza Ali kuti vauye nebhuku.
2- Baba vakabvunza Ali kuti vauye nebhuku.
Ngationgorore mutsara wokutanga pamusoro apa:
Baba vake vaida kuti vauye nebhuku kubva kuna Ali, asi ibhuku rei iri? Zvose izvi hazvitauri.
Asingatauri, Ali anonzwisisa uye anounza bhuku raanouya naro kubva pamutongo. Saka bhuku rino rinozivikanwa, kwete bhuku risina kuwanikwa.
Saka Ali anonzwisisa bhuku ripi rakarondedzerwa neshoko rebhuku.
Saka pano ndizvo zvakananga zvinoreva zvinowanikwa.
KUFUNGA IZVI: Das Deutsche Alphabet, Tsamba dzeGerman
Baba vake vanoda kuti vauye nebhuku, Ali.
Munyori webhuku, ruvara, urefu, zita, nezvimwe. Hazvina kukwana kuva nebhuku.
Uye zvakare pano indeterminate It ichashandiswa.
Kune dzimwe nyaya dzinonakidza mumutauro wechiGermany, kusanganisira zvakanaka zvisingaverengeki zvigadzirwa uye zvisingazivikanwi zvisiri izvo.
Zvakanaka Hazvizivikanwi Nyaya: ein - eine
Zvinhu zvisina kunaka zvinogadziriswa: handizvo
Chokutanga pane zvose, ngatipei ruzivo pamusoro pe ein uye eine artifacts.
ZVIMWE ZVINOKOSHA NEPOSITION MUGERMAN
German munhu ve eine Kune mairi maviri ezvinyorwa-zvinofadza.
Mashoko okuti ler ein gelir uye "eine" anoreva gerir one im muTurkey.
Ein, der uye das artikelinin zvakanaka-yakaipa,
Eine ndiyo inofadza-yakaipa yefa artikel.
Ona mienzaniso inotevera:
der Fisch: hove
ein Fisch: hove (chero hove)
Der Baum: Muti
ein Baum: muti (chero muti)
ein Buch: bhuku (chero bhuku)
das Kind: vana
ein Mutsa: mwana (chero mwana)
die Ona: gungwa
eine Ona: gungwa (chero gungwa)
kufa Sprache: License
eine Sprache: mutauro (chero mutauro)
Sezvo zvinogona kuonekwa kubva mumienzaniso, "ein in inotsiviwa ne" ein "pane" der "," ein muchinzvimbo che "das" uye gibi eine "panzvimbo yekufa".
Caution: Kuziva kusina chokwadi kweDER uye DAS nenyaya dzakananga ndeye EIN.
Iko kusatendeseka kwakanaka kweDIE yakaumbwa ndeye EINE.
Iye zvino ngationei zvisina kunaka-zvisikwa zvisingaiti:
NEGATIVE-ZVINHU ZVINOKUDZWA MUGERMAN
Ein uye eine zvakare haina kunaka. Ein artikelinin unyanzvi husina kunakakein(((Kubika). The negative of Eine art Ekwete(Kayne). Kein uye, mune Turkish "hakusi" kana "kwete" sezvo vanogona kushandura chinangwa, akawedzera kuti negativity zvishongo pamwe zvirevo zvomene (-Up, -MA) vari convertible.
Caution: Das akaipa nokusingagumi uye chivakashure IDZIKA ndiye CEA Nyaya.
Kusaziva kusina chokwadi kweDIE chigadzirwa KEINE.
Zvino, kana tichatora zvinhu izvi pamwe chete:
"ariZuva rakanyatsozivikaniswa risina chokwadi chechinyorwa sizmunhuSiz, kusava nechokwadi "kein".
"ariZuva rakanyatsozivikaniswa risina chokwadi chechinyorwa sizeineSiz, kusava nechokwadi "kwete".
Mienzaniso yeNON-JERMAN ARTICLES
ein Fisch: hove
kein Fisch: "kwete bhinzi balık kana" hapana hove k
ein mutsa: mwana
kein Kind: "kwete mwana kubvisa kana" hapana mwana k
eine Tasche: bhegi
keine Tasche: "kwete bhegi" kana: hapana bhegi k
chivakashure inowanikwa German pamwe chikamu chino (in, Das, kufa), yakanaka kana indeterminate Articles (yksi, ein) uye kunaka nokusingagumi (kein, keine) akapa mashoko pamusoro boka, kusanganisira.
Muchikamu chinotevera, tichaongorora kushandiswa kwezvinyorwa.
German Shona Words (E tsamba - 2)
Zvakanakira sosi yeuchi
TAGS: 10. kirasi german nyaya inotaura, 9. kirasi german nyaya inotaura, mutauro wechiGiriki mutauro, chi German chine articels, chi German chinyorwa chirevo, german ein eine, German ein eine subject expression, German
MUVANZI KUCHOKURUKURWA - 24 KUBVUNZA
Cemre su akati:
Ndinokutendai zvikuru nzvimbo inobatsira ini pakarepo ndinonzwisisa kuti uri kutaura zvakanaka.
01 Range 2018, 18: 35
Zuva pashure ndakatanga kudzidza mutauro muGermany 20 Ndine pabvunzo axnumx painoperera. Ndine urombo zvikuru kuti handina kumbosangana newebsite yako. Iwe wakashandisa mazwi akajeka akadaro aya mazwi akajeka asina cheat. Ndinofanira kukutendai. Utano kumabasa ako.
For unbestimmte "chero" Tsanangudzo handizvo 100%, mukadzi Pakusuma kirasi mukati boka, Ayse IST kufa nainen Ayse IST ein Frau, Hasan IST Der Mann haasi A Mann kana Ali IST Das Kinder kwete, Ali IST yksi Kind tikati. nokusingagumi Nyaya Countability anopawo Somuenzaniso: Hier meillä kuti kaksi Kinder. Ich suche drei Männer.
Ndinokutendai zvikuru kwazvo ndinokuvongai